မြ၀တီ - သတင်းထူး သတင်းဦး နေ့ စဉ်ဖြန့် ချီ မြ၀တီ
Home	သတင်းများ	ခေါင်းကြီးပိုင်းသတင်းများ	အယ်ဒီတာ့အာဘော်	တပ်မတော်သတင်း	ပြည်တွင်းသတင်းများ	နိုင်ငံတကာစစ်ရေးသတင်း	နိုင်ငံတကာသတင်းများ	မှုခင်းသတင်း	သတင်းသုံးသပ်ချက်	နိုင်ငံတကာသုံးသပ်ချက်	ပြည်တွင်းစစ်ရေးသတင်း	ကြားဖြတ်သတင်းများ	ပေးစာကဏ္ဍ	အမေးအဖြေကဏ္ဍ	အနုပညာ	စီးပွားရေး	အားကစား	နည်းပညာ	ကျန်းမာရေး	ဖျော်ဖြေရေး	စာအုပ်စင်	စာအုပ်စင်	ဗဟုသုတ	ကမ္ဘာ့ တစ်လွှားထူးထူးခြားခြား	အဖွဲ့ အစည်းများအကြောင်း	BreakingNews	ရန်ကုန် မေ ၃ဝ
မြန်မာ့ လက်ရွေးစင်ယူ-၂၃ အသင်း ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်မည့် (၂၈) ကြိမ်မြောက် ဆီးဂိမ်း ရန်ကုန် မေ ၃ဝ
မြန်မာ့ လက်ရွေးစင် အသင်းသည် ဇွန်၁ ရက်တွင် အိမ်ကွင်းအဖြစ် လက်ခံကျင်းပမည့် Sport Menu မြန်မာ့အားကစားသတင်းများကမ္ဘာ့ အားကစားသတင်းများဂေါက်ဖ်တင်းနစ်လိဂ်ပွဲစဉ်များမြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ်ပရီးမီးယားလိဂ်လာလီဂါစီးရီးအေ
Sunday, 31 May 2015 10:57	ဖယ်လ်ကာအို ချယ်လ်ဆီးသို့ ပြောင်းရွှေ့ရေး ဖယ်လ်ကာအို ချယ်လ်ဆီးသို့ ပြောင်းရွှေ့ရေး	Written by စကားဝါ
Read more...	Sunday, 31 May 2015 10:49	ဆီးဂိမ်း ပြိုင် ပွဲ တွင် အုပ်စု တက်ရေး အမှတ်တူနေပါက ထိပ်တိုက် တွေ့ဆုံမှုဖြင့် ဆုံးဖြတ် သွားမည် ….	Written by စကားဝါ
မြန်မာ့ လက်ရွေးစင်ယူ-၂၃ အသင်း ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်မည့် (၂၈) ကြိမ်မြောက် ဆီးဂိမ်း အမျိုးသား ဘောလုံးပြိုင်ပွဲများကို ယမန်နေ့မှ စတင်ယှဉ်ပြိုင် ကစားခဲ့ပြီး ဆီမီးဖိုင်နယ် အဆင့်သို့ တက်လှမ်းမည့် အသင်းများ အုပ်စုတွင်း
Read more...	Sunday, 31 May 2015 10:42	မြန်မာ့လက်ရွေးစင် အသင်း ဇွန် ၁ ရက်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ထွက်ခွာ၍ ဇွန် ၅ ရက်တွင် ကမ္ဘော ဒီးယားနှင့်ခြေစမ်းမည် ….	Written by စကားဝါ
မြန်မာ့ လက်ရွေးစင် အသင်းသည် ဇွန်၁ ရက်တွင် အိမ်ကွင်းအဖြစ် လက်ခံကျင်းပမည့် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ထွက်ခွာမည်ဖြစ်ပြီး ဇွန်၅ ရက်တွင် ကမ္ဘောဒီးယား အသင်းနှင့် ခြေစမ်း၍ ကစားသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Read more...	Saturday, 30 May 2015 12:28	သုံးနှစ်အတွင်း ဖလားအားလုံး ရရှိနိုင်သူအဖြစ် ဂယ်ရီကာဟေး စံချိန်တင်	Written by ကေတု
Read more...	Saturday, 30 May 2015 12:26	အောင်မြင်သောနှစ် ဖြစ် မဖြစ်ကို အက်ဖ်အေ ဖလားက ဆုံးဖြတ်မည်	Written by ကေတု
Read more...	Saturday, 30 May 2015 12:25	မိုးသည်းထန်ပြီး ရေကြီးခဲ့၍ မန်စီးတီး အသင်း၏ ဟူစတန်ဒိုင်နမိုနှင့်ပွဲ ဖျက်သိမ်းခဲ့	Written by ကေတု
Read more...	Saturday, 30 May 2015 12:23	ဖီဖာအမှုဆောင် ကိုးဦးကို ဖမ်းဆီးခြင်းမှာ အမေရိကန်၏ တခြားနိုင်ငံများ တရားစီရင်ရေးအပေါ် စွက်ဖက်ခြင်းဟု ပူတင်ဝေဖန်	Written by ကေတု
Read more...	Saturday, 30 May 2015 12:22	ဘင်နီတက်ဇ် နာပိုလီမှ ထွက်ခွာမည်ဟု ကြေညာ၍ ရီးယဲလ်နည်းပြ ဖြစ်လာရန်သေချာ	Written by ကေတု
Read more...	Saturday, 30 May 2015 12:19	အခွင့်အရေးများ ဖန်တီးနိုင်ခဲ့သော်လည်း ဂိုးသွင်း မကျိန်းသေမှုများကို ပြင်ဆင်ရန် လိုအပ်နေသေးကြောင်း မြန်မာနည်းပြ အေဗရာမိုဗစ်ခ်ျဝန်ခံ	Written by ကေတု
မြန်မာ နေရှင်နယ်လိဂ်နှင့် မလေးရှား စူပါလိဂ် တို့ကြားတွင် ကွာခြားမှု များစွာရှိနေဟု ဧရာဝတီအသင်း မန်နေဂျာ သုံးသပ်	အက်ဖ်အေ ချန်ပီယံ (၁၂)ကြိမ်နဲ့ မန်ယူစံချိန်ကို ကျော်ဖြတ်မယ့် အာဆင်နယ်	ဗိုလ်လုပွဲမှာ မိနစ် ၉ဝ အတွင်း သုံးဂိုးလိုတဲ့ ဘာစီလိုနာနဲ့ မစွန့်စားသင့်	(၂၈)ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲ ယှဉ်ပြိုင်မည့် မြန်မာ Netball အားကစား အဖွဲ့ စင်ကာပူနိုင်ငံသို့ထွက်ခွာ	သန်းသန်းထွေး ဒဏ်ရာ အခြေအနေကြောင့် ကစားသမားဘဝမှ အနားယူရဖွယ်ရှိ	Start Prev 1234567 8910 Next End Page 1 of 323	Stay Connected with us Facebook Rss Twitter Mobile Newsletter Tivi ဂါးရတ်ဘေးလ်အား ခေါ်ယူမည် ဆိုပါက မန်ယူ အနေဖြင့် လန်ဒန် မတ် ၁၇
ပရီးမီးယားလိဂ် ဇယားထိပ် အသင်း မန်ယူသည် စပါး Read more	နာနီအတွက် မန်ယူ သဘောထား ကြီးစေလိုတဲ့ အာဆင်နယ် အာဆင်နယ် အသင်းသည် မန်ယူနှင့် ပေါ်တူဂီကွင်းလယ်လူ နာနီကို Read more	ကမ္ဘာ့ဈေးအကြီးဆုံး ထိပ်တန်းဘောလုံးသမား ငါးဦး လန်ဒန် ဒီဇင်ဘာ ၁ဝ
ကမ္ဘာ့ ဈေးအကြီးဆုံး ဘောလုံး သမားများ Read more	နာနီ နေရာကို လီဗာပူးလ် လူငယ် ကစားသမား မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းသည် အသင်းမှ ထွက်ခွာရန် Read more	ရီးယဲလ် နည်းပြ ဟိုဆေး မော်ရင်ဟိုကို မန်ယူ နည်းပြ လန်ဒန် ဒီဇင်ဘာ ၃
ရီးယဲလ် နည်းပြ ဟိုဆေး မော်ရင်ဟိုသည် မန်ယူ Read more	ဗန်ပါစီအား မန်ယူ၏သူရဲကောင်းအဖြစ် မြင်တွေ့ရမည်ဟု လန်ဒန် နိုဝင်ဘာ ၂၈
မန်ယူအသင်း ပရီးမီးယားလိဂ် ဖလား Read more	မန်ယူ အသင်း၌ ဂိုးသွင်းရန် လွယ်ကူဟု ဗန်ပါစီ လန်ဒန် ဇန်နဝါရီ ၂
မန်ယူ အသင်း၌ ကစားရာတွင် တိုက်စစ်မှူး Read more	၉၆ မီတာကို ၁ဝစက္ကန့်နှင့် ပြေးခဲ့၍ စီရော်နယ်ဒိုအား ရီးရဲလ် တိုက်စစ်မှူး စီရော်နယ်ဒိုသည် မက်ဒရစ် ဒါဘီပွဲတွင် ၉၆ Read more	သိပ္ပံနည်းကျ တွက်ချက်ထားသော ရော်နယ်ဒို၏ ခရစ္စတီယာနို ရော်နယ်ဒို ဘာနေဗျူးတွင် သွင်းယူခဲ့သည့် Read more	ယခုတစ်ပတ် ကစားမည့် ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ် လီဗာပူး Vs နော်ဝစ်ခ်ျ
မန်ယူကို ရှုံးနိမ့်ခဲ့ အပြီးမှာ Read more	ရိုးမားနဲ့ ထပ်မံ သတင်း ထွက်ပြန်တဲ့ နာနီ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်ရဲ့ တောင်ပံ တိုက်စစ်မှူး ဖြစ်သူ လူးဝစ် Read more	မန်ယူသို့ ပြန်ရောက်ဖို့ နီးစပ်နေတဲ့ စီရိုနယ်ဒို ရီးရဲလ် တိုက်စစ်မှူး စီရိုနယ်ဒိုသည် အသင်းမှ စာချုပ်သစ် Read more	ကမ္ဘာ့ အကောင်းဆုံး ကစား သမားဆု မည်သူ ကမ္ဘာ့ ဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ် ဌာနချုပ် တည်ရှိရာ ဆွစ်ဇာလန် Read more	ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ်(၅) ခန့်မှန်း သုံးသပ်ချက် ဝက်စ်ဘရွန်း- ဆန်းဒါးလန်း
(စနေနေ့ ည ၈း၃ဝ)